Buugaagta wax ka qabta Jinsiga | SABAB (Isbahaysiga ka dhanka ah waxbarashada galmada ee aan badbaadada lahayn)
Buugaag Ku Saabsan Transgenderism.
Walt Heyer wuxuu ku noolaa 10 sano haweeney ka hor inta aan la xirin. Wuxuu hayaa liis dhammaystiran oo buugaag ah oo la akhriyo
Hal Hooska Cawl. Qoraa Patrick Byrne wuxuu ogaadey in inbadan oo ka mid ah ereyga aqoonsiga jinsiga la baaro, wuxuu sii noqonayaa mid aan la hubin, madmadow iyo iska hor imaad wuxuuna keenayaa isku dhacyo qoto dheer oo xagga sharciga iyo dhaqanka ah.
Buugga Greyga Yar ee Jinsiga iyo Jinsiga. Qoraa Patrick Byrne wuxuu su'aal ka qabaa fikirka (falsafad "aaminaad" leh ajende siyaasadeed) transgenderism.
Markuu Harry Noqday Sally - Ryan T Anderson Wiil ma ku “xayiran karaa” jirka gabadha? Daawada casriga ahi "ma ku wareejin kartaa" galmada? Jinsigayagu ma yahay "mid loo qoondeeyey" meesha ugu horeysa? Waa maxay jawaabta ugu jacaylka badan ee qofka la kulma dareen isku khilaafsan jinsiga? Muxuu sharcigayagu ka odhanayaa arrimaha "aqoonsiga jinsiga"?
Maxay Gabdhaha Yaryar Ka Sameeyeen - Wendy Francis. Qofna ma doorto inuu doorto haddii ay dhashaan gabar ama wiil. Midna kan kale kama fiicna. Laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo ku wanaagsan gabadhnimada!
Maxay Yihiin Wiilal Yaryar Oo Laga Sameeyay - Wendy Francis. Wiilasha yaryar waxay ku koraan ragga. Gabdhaha waligood ma sameyn doonaan. Taasi waa waxa wiilasha yaryar ka dhigaya kuwo gaar ah? Hagaag, taasi iyo sababo kale oo badan. Qaar ma ka fikiri kartaa?
Macalimiinta Xidhmada Kheyraadka Transgender. Waxaan diyaarinay hagitaankan iyadoo lala kaashanayo macalimiinta, garyaqaanada iyo shaqaalaha samafalka caruurta si looga caawiyo xirfadleyda dugsiga hoose iyo sare inay maraan caqabadaha ay keeneen tilmaamaha cusub ee iskuulada transgender
Binary Australia waxay soo saartay PC Pack si ay gargaar ugu fidiso waalidiinta carruurta leh iskuulada si ay ugala taliyaan sida ugu wanaagsan ee loola tacaali karo fikradaha jinsiga ee halkaas lagu barto